Uzbekistan:Fantatra ireo fahavalon’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Marsa 2011 9:20 GMT
Sary famantarana ny Andro Eran-tany enti-manohitra ny Fanivanana anaty Aterineto, Reporters Without Borders
Omaly, 12 Martsa no Andro Eran-tany enti-manohitra ny Fanivanana anaty Aterineto. Natsangan'ny Reporters Without Borders tamin'ny 2008, ny tanjona amin'izany dia ny hanapariahana ny hevitra momba ny Aterineto tsy misy fetra sy malalaka ho an'ny rehetra.
Vao haingana izay dia namoaka lisitra na firenena ny Reporters Without Borders, izay heverina ho Fahavalon'ny Aterineto. Ahitana firenena miisa 10 io lisitra io: Burma, Shina, Kioba, Iran, Korea Avaratra, Arabia Saodita, Syria, Turkmenistan, Uzbekistan ary Vietnam. Matetika dia any amin'ireo firenena ireo no ahitana ny fanivanana ny aterineto sy fanenjehana ireo mpitoraka bilaogy. Misy ihany koa ny lisitr'ireo firenena (16) Voahara-maso izay mety ahitan-doza ny fahalalahana sy ny fanehoa-kevitra ao amin'ny aterineto ary misy fanandraman'ireo governemanta sasany hifehy ny Aterineto.
Saritanin'ny fanivanana Aterineto, march12.rsf.org
Toy izany, ny Andro Eran-tany Enti-Manohitra ny Fanivanana ny Aterineto dia fiezahana hisarika ny sain'ny fiaraha-monina sivily amin'ny fetran'ny fahalalahana miteny amin'ny media ao anaty Aterineto.
RSF dia mitatitra:
Ny taona 2010 dia tena nametraka ny anjara asan'ny fifandraisana sosialy sy ny Aterineto ho tahaka ny fitaovana fivezivezena sy fampitana vaovao, indrindra nandritra ny lohataonan'ny tany Arabo. Voaporofo fa tena efa miha-mifameno ny media vaovao sy nentin-drazana. Mandritra izay fotoana izay, nanatevina ny fanivanana, ny fampielezan-kevitra sy ny famolahana ireo fitondrana mpanao famoretana, izay nampidirana mpampiasa aterineto 119 any am-ponja. Ireo fanontaniana tahaka ny fiarovan'ny firenena – misy hifandraisany amin'ireo lahatsoratra nivoaka tao amin'ny WikiLeaks – sy ny fananana ara-pahaizana – dia fifaninanana amin'ny fanohanana ireo firenena demokratika amin'ny fahalalahana miteny.
Ohatra, any Uzbekistan – iray amin'ireo firenena voatonon'ny RSF ho fahavalon'ny Aterineto, voasakana daholo ireo vohikala manohitra sy ireo izay mitatitra ny zava-misy marina any amin'ny firenena. Tsy ireo vohikalan'ireo masoivoho Rosiana sy eto an-toerana mpitatitra vaovao ihany no ao anatin'izy ireo, tahaka ny ferghana.ru, Neweurasia.net, Uzmetronom.com, Eurasianet.org, fa misy ihany koa ireo iraisam-pirenena tahaka ny BBC.com sy Alazeera.net.
Ity no hitan'ireo mampiasa Aterineto mipetraka any Uzbekistan rehefa mihezaka miditra amin'ny rohin'ny neweurasia.net avy hatrany izy ireo:
Sary nalaina rehefa nididtra tao amin'ny neweurasia.net, isary avy ao amin'ny neweurasia.net
Ary koa, ireo fangatahana ao amin'ny “browser” dia matetika voasolo an'ireo fangatahana hafa tsy misy hifandraisany (www.msn.com, ohatra).
Ny 11 Martsa 2011 dia namoaka lahatsoratra iray mikasika ny fahafahana miditra ao amin'ny Aterineto sy ny fanaovan-gazety ao amin'ny Aterineto any Uzbekistan ny RFS. Tonga tamin'ity fehinteny ity ny fikarohan'ny RFS:
Raha mbola mitohy ny fanehoan'ireo manam-pahefana Uzbek ny fahalianan'izy ireo amin'ny fifehezana ny Aterineto, ary tsy misy fiaraha-monina sivily tena afaka hanohitra azy ireo – na dia ao amin'ny aterineto aza– na ireo famoretana iraisam-pirenena na inona na inona izany, dia maizina ireo vinavina ho an'ny fahalalahana miteny amin'ny tontolon'ny Aterineto any Uzbekistan
Tsy ireo fanehoana ny fihetseham-po vaovao ihany no ao anatin'ny fanivanana Aterineto any fa hita ao ihany koa ireo fifandraisana sosialy, ireo sehatry ny fitoraham-bilaogy, ireo tolotra ao amin'ny mailaka, sns. Izany antony izany no mahatonga ireo mampiasa Uzbek maro mitady ireo fitaovana (proxy-servers) izay afaka mihoatra izany fanivanana aterineto izany amim-pahatokisana. Maro no mahatakatra fa ny fomba tsotra indrindra amin'ny fihoarana ny fanivanana aterineto dia ny fampiasana “browser proxy”. Maro ireo maimaim-poana sy ahafahana miditra amin'ny ankamaroan'ireo loharanon'ny Aterineto voasakana avy amin'ny alalan'ny “browser”.
Ireo “prox” malaza sy mora-hiavanana kokoa dia ny Your Freedom, Tor, HotSpotShield, Psiphon.
Ny fanampi-panazavana bebe kokoa momba ireo fanodikodinana fitaovana, anisan'izany ireo voatonona tao anatin'ity hafatra ity, dia azo jerena ao amin'ny sesawe.net .
Ireo lahatsary mampianatra ny fikirakirana sy ny fampiasana ireo “proxy-servers” miaraka amin'ny dikanteny maro dia hita eto.
Afganistana 05 Jona 2022